Etu ị ga-esi mee akwụkwọ ahụaja 3D iji LucidPix na TikTok
Etu ị ga-esi mee akwụkwọ ahụaja 3D iji LucidPix na TikTok Akwụkwọ ahụaja na ihuenyo mkpọchi ekwentị anyị bụ akụkụ dị mkpa nke njirimara anyị. Ha na-egosiputa ụdị mmadụ anyị bụ, ọnọdụ anyị ugbu a, na ihe ndị na-amasị anyị. Ọtụtụ mmadụ gụnyere foto nke…
Etu esi biputere ihe omuma nke Instagram na 3D Instagram emeputala usoro akuko ohuru nke na-enye gi ohere ikwuputa onyonyo otu ubochi, odi nnoo ka ihe Snapchat n’eme ha. Nke a nwere ike ịdị mma maka ịkekọrịta oge pụrụ iche ...
Etu ị ga-esi nweta 100K ọnwa kwa ụbọchị na Pinterest na otu ọnwa
Etu ị ga-esi nweta 100K ọnwa kwa ụbọchị na Pinterest na otu ọnwa Pinterest bụ ohere ịntanetị n'ịntanetị na ebumnuche nke ịkekọrịta ọdịnaya, iso ndị ọrụ okike ndị ọzọ na-emekọrịta ihe, ọ na-emekwa dị ka isi iyi nke mmụọ. Anyị sonyere na nso nso a ...
Etu esi agbakwunye ma wepụ Wepu 3D na LucidPix Anyị enwetala ajụjụ ụfọdụ na nso nso a banyere imepụta foto 3D gị na enweghị 3D Frame, yabụ, na nzaghachi anyị na-enyere gị aka ịgagharị ngwa a ka mma site na post blog a! Mepee ...
Etu esi Ese 3D foto na Ederede
Etu esi ewepụta foto 3D tinyere ederede Dị ka mmelite kachasị ọhụrụ anyị, ndị ọrụ nwere ike hazie foto 3D ha na ederede! Na post blog a, anyị ga na-enye gị nzọụkwụ site na ntụpụ ụkwụ iji nyere gị aka iji nke ọhụrụ a ...
Etu esi mepụta vidiyo Pụrụ Iche TikTok Ọ bụrụ na ịnụbeghị, TikTok abụrụla ihe mgbasa ozi ọhaneze kachasị ọhụrụ nke 2020. E mepụtara ngwa ahụ ka ọ bụrụ vidiyo vidiyo nke 15 na 60 nke ndị mmadụ na-agba egwu na egbugbere ọnụ obere maka ...
Etu esi Ese foto 3D na Facebook
Etu esi Ese foto 3D na Facebook tochọrọ ịmatakwu banyere ntụgharị 3D nke Facebook na otu o si jiri ntụnyere 3D LucidPix? Nọgide na-agụ! Na-eche ihe kpatara ị na - ahụ ọtụtụ foto onyonyo atọ dị na ...